Ny Valosoa, 12 Aogositra 2017 (I). Marc Ravalomanana-Toamasina, Fampihavanana (CFM), Krizy, vola … | Mouvement des Citoyens Malagasy de Paris
← Toamasina. Faha 15 taonan’ny antoko TIM, asabotsy 12 Aogositra 2017. Marc Ravalomanana.
Ny Valosoa, 12 Aogositra 2017 (II). Ao Andapa ao, Antsiranana, Foulpointe, Ihosy… →
Ny Valosoa, 12 Aogositra 2017 (I). Marc Ravalomanana-Toamasina, Fampihavanana (CFM), Krizy, vola …
Rôla hatrany ny filoha Ravalomanana
Tato anatin’ny andro maromaro izao dia tsy mipetraka mihitsy ny filoha Marc Ravalomanana, filohan’ny komitin’ny jobily fankalazana ny faha-50 taonan’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara (FJKM), sady filoha nasionalin’ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM). Na manana izay kasikety roa izay aza i Dada, miavaka tsara ny hetsika ataony amin’ireo faritra lalovany, misaraka tanteraka ny hetsika ara-pinoana eo amin’ny sahan’ny finoana FJKM, sy ny hetsika politika hiarahany amin’ny antoko izay najorony. Tamin’ireo toerana rehetra nolalovany ireo dia hita fa tena rôla araka ny fitenin-jatovo azy mihitsy i Dada, ifanotofan’ny rehetra, na lehibe, na kely, na antitra, na tanora, na olon-tsotra, n any sahirana, na ireo olona manana ny maha-izy azy.
Tamin’ity herinandro ity dia tany Ambatomanga Manjakandriana faritra Analamanga, sy tany Toamasina renivohitry ny faritra Atsinanana ny filoha Marc Ravalolanana. Tany Ambatomanga dia nitondra ny traikefany eo amin’ny fahaiza-mitarika na leadership ho an’ireo talen-tsekoly FJKM manerana ny Nosy nivory tany izy. Tany Toamasina, nitondra izay fahaiza-manaony sy fahaizany mitarika ary ny traikefany eo amin’ny finoana izay, ho an’ireo Sekoly Alahady FJKM manerana ny Nosy koa i Dada. Nifarana omaly tao amin’ny Lycée FJKM David Jones Anjoma izany Fihaonambe faha-VI ny Sampana Sekoly Alahady FJKM izany. « Sekoly Alahady miaina amin’ny Tenin’Andriamanitra, sahy mijoro ho vavolombelon’i Jesoa Kristy », no loha-hevitra tamin’izany. “Fifaliana mandrakariva ny miaraka aminareo zanaka ato amin’ny Sampana Sekoly Alahady”, hoy ny filoha Marc Ravalomanana nandritra ny fotoana.
Tao an-renivohitry ny faritra Atsinanana ihany omaly, niatrika ny faha-500 taonan’ny Refôrmasiôna sy ny faha-150 taonan’ny Fiangonana Loterana Malagasy (FLM), nokarakarain’ny sampana Sekoly Alahady Saloma tao amin’ny fiangonana FLM Morarano izy. “Ny marina amin’ny finoana no ho velona” no loha-hevitr’izany. Anio kosa dia hetsika ara-politika ranofotsiny no hatrehany dia ny fankalazana ny faha-15 taonan’ny antoko TIM, sy ny kongresim-paritr’ity antoko ity any amin’ny faritra Atsinanana sy Analanjirofo. Mbola hotaterina eto ihany ny akon’izay.
Manomboka sahiran-tsaina ny mpamadibadika palitao sy ny mpitrandraka seza politika
Valaka ary hita ho sahiran-tsaina ireo mpamadibadika palitao hatramin’izay satria manomboka voaavaky ny vahoaka izy ireny amin’izao fotoana izao. Tsy afaka mandresy lahatra olona intsony fa efa diso kajy tanteraka ny ankamaroan’izy ireny. Voajonon’ny mena miraviravy hany ka tsy afaka nanafin-kiho fa nitabataba nanenjika ny mpomba ny Filoha Ravalomanana kanefa izao manenina fa hay ity olona nenjehina mbola tena mamim-bahoaka. Saika ireo efa tena mpivadika hatramin’izay avokoa no voa tamin’ity indray mitoraka ity hiroso maty raibe hihemotra maty renibe hany ka zary lasa misitrisitrika fa tsy sahy maneho hevitra intsony. Nisy mihitsy ny sasany tamin’izy ireny no nilaza ny hiala sasatra eo amin’ny resaka politika satria efa mahatsapa sahady fa tsy hahazo olona intsony na handainga fahazato faharivo aza. Ireo izay tafalatsaka ao anatin’ny fitondrana amin’izao fotoana moa efa tsy mahasahy miresaka satria kendan’ny vomanga nasesiky ny tanany.
Nihevitra ny hahatafavoaka baolina kinanjo taraiky farany, hany ka zary lasa miteniteny foana amin’ny fiarovana be fahatany ny antokon’ny mpitondra. Misy kosa ireo nahazo toerana saingy tsy sahy mipoipoitra mihitsy na dia lanonam-panjakana aza satria diso fantatr’olona loatra ny antoko nisy azy teo aloha. Hatreto, matanjaka ny antoko T.I.M sy ny mpanara-dia ny Filoha Ravalomanana Marc raha ny aty Alaotra Mangoro manokana no jerena ary mbola tsy nivadika tamin’ity filoha ity avokoa ny ankamaroan’ny vahoaka fa ireo mpitantana sasantsasany no nidiran’ny valan’aretin’ny fitiavan-tseza ka izao vao manenina.
Komitin’ny fampihavanana (CFM)
Mahakivy ny fifantenana ireo mpikambana ao anatiny
Lasa resabe eto amin’ny firenena ny fomba entina hanendrena ireo ho mpikambana vaovao ao anatin’ny komitin’ny fampihavanana eto Madagasikara n any CFM. Toy ireny manala fanadinana ireny ireo kandida 10 isaky ny faritra voafantina , ka ny ao antsain’izy ireo voalohany amin’izany dia ny ho afa-panadinana . Vokany , toerana sy voninahitra ary vola avy hatrany no mibahana ao an-tsain’ireo ho tafita eto fa tsy izay resaka fampihavanana izany akory .
Hita mibaribary fa ireo mpifaninana mihazakazaka ny ho tafita sy ho afa-panadinana voalohany ao anatin’io komitin’ny fampihavanana io dia ireo mpanao politika, minisitra , depiote mpikambana tao amin’ny kongresin’ny tetezamita teo aloha , ary ireo mpanao politika tsy manana vahoaka mpanaraka fa mpiandry tataka fotsiny . Tsy vitan’izany fa ny maro ao anatin’io komitin’ny fampihavanana io dia ho tendren’ny filohampirenena Hery Rajaonarimampianina , ka ny loza aterak’izany dia ireo tsy manana toetsaina tsy momba ny atsy sy eroa (neutre) fa mitanila sy manilika ny hafa tsy mitovy hevitra amin’ny mpitondra no ho maro ao , koa inona no antenaina amin’izany ? ny mpitondra fanjakàna HVM no hahazo tombony amin’io , dia ho eto ihany isika Malagasy hifanenjika an-toerana eto .
8 taona aty aoriana, tsy misy fiafarany ny krizy eto amin’ny Firenena
Enina ambiroapolo taona ny alakamisy lasa teo ny 10 Aogositra 1991 ny « diaben’ny fanafahana » notarihan’ny « Herivelona Rasalama » ka nilahatra nankeny Mavoloha ny vahoaka efa amana hetsiny teto an-drenivohitra. Volana vitsy taorian’io andro io rehefa nihiboka andro maromaro teny Andrainarivo, Hôtel Panorama, ireo politisiana mpikambana tao amin’ny antoko politika teo amin’ny fitondrana sy ny tao amin’ny « Herivelona Rasalama » dia namoaka ny « fifanarahan’ny 31 Oktobra » (Convention du 31 Octobre). Niaraha- nahalala fa nitsoka maneran-tany ny rivo-panafahana (wind of change) tamin’ny taona 1990 ka nirodana ny rindrin’i Berlin (Mur de la Honte), nitresaka ny Firaisana Sovietika (Union des Républiques Socialiste Soviétique), nitsoka teto Madagasikara ihany koa izany rivo-panafahana izany ka nidaraboka ihany koa ny Repoblika Demokratika Malagasy izay nirona tamin’ny firehana sosialista.
Araka ny fifanarahana tamin’izany dia tsy nihoatra ny roambinifolo volana ny tetezamita ka ny Ben’ny tanànan’Antananarivo, Razanamasy Guy Willy no filoham-panjakana nitondra ny Firenena. Azo lazaina fa tsy nisy krizy loatra nandritra izany fepotoana izany. Raha ny marina dia ny krizy taona maro teto teo aloha, izay naneran-tany mihitsy, no tena antony nampirodana ny Repoblika II noho ny politikam-pitantanana nanjakan’ny kinamanamana (népotisme, favoritisme) sy ny fiaraha-nisaosy izay nampalaza ilay fitenenana “samy mandeha samy mitady” ka nampikoroso fahana ny fiainam-bahoaka. Samy mahatsiaro ny rehetra fa nilaharana teny amin’ny fokontany avokoa ny entana nilain’ny mponina andavanandro (vary, menaka, sns…). Nitsangana ny Repoblika III-1 ka “Fahafahana-Tanindrazana-Fandrosoana” ny teny filamatra. Nomena anarana ho “rain’ny demokrasia” ny Pr. Zafy Albert kanefa noraisin’ny gasy ara-bakiteny izany ka tsy voafehin’ny lalàna intsony ny vahoaka ary nanjaka ny gaboraraka. Tsy nisy fampandrosoana azo notsapain-tànana teto amin’ny Firenena ary nomen’ny Lalàmpanorenana fahefana be loatra ny Antenimieram-pirenena ka tsy sarotra tamin’ity andrimpanjakana ity no nanongana azy tamin’ny alàlan’ny “empêchement” na dia ny mpikambana tao amin’ny antoko politikany, UNDD, aza no maro an’isa tao. Ny fahatsapana azy dia toa lasa nivezivezy nitety an’i Madagasikara no nataon’ny Pr. Zafy Albert fa tsy nanana programam-pampandrosoana teo amin’ny sehatra rehetra ihany koa izy. Nanampy trotraka ny tsy nahazoana famatsiam-bola avy any amin’ireo mpamatsy vola mahazatra ka nampidirana ny “famatsiam-bola mira zotra” (financement paralèlle) kanefa tsy nahafahana nanao na inona na inona izany. Teo koa ny disadisa teo aminy sy ny praiminisitra Ravony Francisque izay nifatraran’ny tsy fahombiazana rehetra ka na dia nosoloina olona nahatoky ny filohan’ny Repoblika III-1 aza izy dia tsy nampiova na toe-draharaha izany. Tsy nisy krizy ara-politika loatra teo amin’ny fifandimbiasam-pitondrana teo amin’ny Repoblika III-1 sy ny Repoblika III-2 satria tsy nisy kandidà nanana ny fahaizana mandresy lahatra ny vahoaka ny mpifaninana ka tafaverina teo amin’ny fitondrana indray ny Amiraly Ratsiraka Didier. Ny nataony voalohany dia ny fikitihana ny Lalàmpanorenana ary nanaisotra ilay fehefan’ny Antenimieram-pirenena.
Tsy niteraka krizy vaovao ny fifandimbiasam-pahefana kanefa tsy nitondra fampandrosoana ihany koa. Tsy fanonganam-panjakana no nahatongavan-dRavalomanana Marc teo amin’ny fitantanana ny Firenena, ny vahoaka no niaro ny safidiny tamin’ny fifidianana ka nahatonga ny fitokonana lavareny efa ho enim-bolana teo amin’ny Kianjan’ny 13 Mey. Nisy tokoa ny krizy pôlitika kanefa toa niravona ihany izany taorian’ny fifampidinihana tany Dakar- Sénégal indroa niantoana. Hitam-poko, hitam-pirenena anefa tamin’ireny fotoana ireny fa nitsiry tao an-tsain’ny politisiana gasy sasantsasany ny fananganana ny rafitra “federalista” izay tena fizarazarana ny Firenena sy ny fampiharana ny “zarazarao hanjakana” ka nisy ny fametrahana barazy tany amin’ny tetezan’i Kamoro, làlam-pirenena faha-4 sy tao amin’ny tetezan’i Brickaville, làlam-pirenena faha-2 sy ny fanapoahana ny tetezana tao Amboasary, Behenjy, làlam-pirenena faha-7. Tsy naharitra ela loatra izany krizy politika izany, kanefa tsapa fa mbola misy tarazo mandraka ankehitriny.
Nambara ombieny ombieny tokoa tamin’ny tetezamita fa tolom-bahoaka ho fanafahana azy tamin’ny didy jadona sy ny fanaovan-dRavalomanana ampihimamba ny harem-pirenena no niteraka ny fanonganam-panjakana tamin’ny taona 2009. Na dia “Fitiavana-Tanindrazana-Fandrosoana” aza ny “teny filamatry” tetezamita sy ny Repoblika IV dia ny mifanohitra amin’izany ny fihetsiky sy ny ataon’ny mpitondra tamin’ny tetezamita sy ny amin’izao Repoblika IV izao. Valo taona aty aoriana dia tsy misy fiafarany ny krizy eto amin’ny Firenena. Tsy eo amin’ny lafiny politika sy ekonomika ihany fa eo amin’ny lafiny kolontsaina sy fisainana sy fomba enti-miaina eo amin’ny fiarahamonina ary indrindra indrindra krizy ara-piarahamonina noho ny tsy fandriampahalemana sy ny fifamonoan’ny mpiray tanindrazana.
Galerie | Cet article, publié dans Non classé, est tagué Marc Ravalomanana, Toamasina. Ajoutez ce permalien à vos favoris.